१ माघ, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय अनलाइन फुड डेलिभरी प्लेटफर्म फुडमाण्डूले विगत ३ वर्षदेखि नियमित रुपमा आयोजना गर्दै आएको अनलाइन फुड फेस्टिवल यस वर्ष पनि यहि शुक्रबार माघ २ गतेदेखि आयोजना गर्ने भएको छ ।
फुडमाण्डूले प्रविधिमा आधारित नेपालको सबैभन्दा ठूलो फुड फेस्टिवल सन् २०१७ देखि नियमित रुपमा आयोजना गरिरहेको छ, जसमा कम्पनीले उत्कुष्ट खानेकुराका साथै आफ्ना ग्राहकहरुलाई मनोरन्जन समेत प्रदान गर्दछ ।
एक सातासम्म संचालन हुने अनलाइन फुड फेस्टिवलमा उत्कुष्ट फुड डिलसहित अग्मेन्टेड रियालिटी गेमका साथसाथै पहिलो पटक लाइभ म्यूजिक समेत आयोजना गर्दैछ । सो लाइभ म्यूजिक इभेन्टमा ज्योभन भुजु, संजय महत, उज्वल मान श्रेष्ठ, प्रसन्ना अधिकारीलगायतका कलाकारहरुले आफ्नो विशेष परफरमेन्स प्रस्तुत गर्नेछन् ।
फुडमाण्डूको अनलाइन फुड फेस्टिवलमा पहिलो पटक पोखरामा समेत आयोजना हुनेछ । कम्पनीले केहि दिनअघि मात्र पर्यटकिय नगरी पोखरामा आफ्नो सेवा बिस्तार गरेको थियो । अब भने पोखरेलीहरुले समेत नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन फुड फेस्टको मज्जा लिन सक्नेछन् । कम्पनीले वार्षिकरुपमा आयोजना गर्ने अनलाइन फुड फेस्टिवलमा कम्पनीले मोबाइल एप्समार्फत अर्डर गर्ने ग्राहकहरुलाई आकर्षक क्यासब्याकका साथसाथै अधिकतम रु. ५०० बराबरको २५ प्रतिशतसम्मको डिस्काउन्ट अफर दिनेछ । त्यसैगरि कम्पनीले क्यूआरमार्फत भुक्तानीमा समेत छुटको सुबिधा दिने जनाएको छ ।
अनलाइन फुड फेस्टिवलमा कम्पनीले रु. १ मा नै ग्राहकहरुलाई खानेकुरा उपलब्ध गराउने छ भने फुड फेस्टिवलमा राखिएका गेमहरु खेलेर थप डिस्काउन्ट समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरि फ्लाश सेलमा दिनको तीन पटक एक एक घण्टाको अफर आयोजना गरिनेछ भने मिस्ट्री ब्यागअन्तरगत न्यूनतम मूल्यमा सरप्राइज फुड प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
अनलाइन फुड फेस्टिवलमा फोनपे मार्फत क्यूआर पेमेन्ट गर्न सकिने र छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । हामीले अनलाइन फुड फेस्टिवल आफ्ना ग्राहकहरुलाई अनलाइन मार्फत फुड अर्डर बिक्री गर्ने मात्र नभएर ग्राहकहरुलाई मनोरन्जन समेत गर्न चाहन्छौं । यस वर्ष हामी फुड फेस्टिभल मार्फत उत्कृष्ट खानासहित लाइभ म्यूजिक परफरमेन्स मार्फत मनोरन्जन समेत प्रदान गर्नेछौं, कम्पनीका माकेटिंग एण्ड सेल्स म्यानेजर श्याम मालीले भने । अझ यस पटक हामीले पोखारामा समेत अनलाइन फुड फेस्टिवल आयोजनागर्ने हुँदा थप उत्साहित भएका छौं । उनका अनुसार ग्राहकहरुले अनलाइन फुड फेस्टिवलमा विभिन्न गेममार्फत भारी डिस्काउन्ट समेत प्राप्त गर्नेछन् ।
फुडमाण्डू अनलाइन फुड फेस्टिवलमा नेपालका उत्कृष्ट रेष्टुरेन्टहरु सहभागी छन जसमध्ये काठमाडौंमा ३० वटा रेस्टुरेन्ट तथा पोखरामा १४ वटा रेस्टुरेन्टहरु सहभागी हुनेछन्, जसले ग्राहकहरुलाई नौलो र उत्कृष्ट स्वादसहित खानेकुराहरुको प्याकेज ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउनेछन् ।
इजरायली सेनाको कारबाहीमा पाँच प्लालेस्टाइन नागरिकको मृत्यु
पीसीआर रिपोर्ट नक्कली, विमानस्थलबाट १२२ जनालाई विदेश उड्नबाट रोकियो
काजल अग्रवालले गरिन् गौतम किचलुसँग विवाह, हेर्नुहोस् नयाँ जोडीको पहिलो तस्वीर
अस्पतालमा सकियो अक्सिजन, शय्यामा छट्पटाउँदै बिरामी